နောက်ဆုံး စမ်းသပ်ခဲ့သော ဟွာဆောင်း - ၁၅ ဒုံးကျည် အသစ်၏ ဓါတ်ပုံများကို မြောက်ကိုရီးယား ထုတ်ပြ?? - Yangon Media Group
နောက်ဆုံး စမ်းသပ်ခဲ့သော ဟွာဆောင်း – ၁၅ ဒုံးကျည် အသစ်၏ ဓါတ်ပုံများကို မြောက်ကိုရီးယား ထုတ်ပြ??
ပြုံးယမ်း နိုဝင်ဘာ ၃ဝ
ဟွာဆောင်း – ၁၅ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုကို စောင့်ကြည့်နေသော ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်း၏ ဓါတ်ပုံများကို မြောက်ကို ရီးယား၏ တရားဝင်သတင်းအေဂျင်စီ KCNA က ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြီးခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကမ္ဘာ့လေထုထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်သော ထိပ်ဖူးတပ်ဆင်ထား သည့် နျူကလီးယား လက်နက်များဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကုန်းမကြီးတို့ ပစ်ခတ်နိုင်သည်ဟုဆိုသော တိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်အသစ်တစ်စင်းကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အကြမ်းဖက်မှုကို ထောက်ခံခဲ့သည်ဟုဆိုသော နိုင်ငံများစာရင်းသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့ကာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အသစ်များကိုလည်း ချမှတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး သီတင်းတစ်ပတ် အကြာတွင် စက်တင်ဘာ လလယ်ပိုင်းမှစတင်ကာ မြောက်ကိုရီးယား၏ ပထမဆုံးဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဒုံးကျည်အသစ်သည် နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏ အမြင့်ထက် ၁၀ ဆ ပိုမိုမြင့်သော အမြင့်ကီလိုမီတာ ၄၄၇၅ အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပျံသန်းချိန် ၅၃ မိနစ်အတွင်း ကီလိုမီတာ ၉၅၀ ခန့်ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း မြောက် ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆိုသည်။
ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ဦးက ဖတ်ပြခဲ့သော ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် “တိုက်ချင်းပစ် ဟွာဆောင်း – ၁၅ ပုံစံအသစ်ကို အောင်မြင်စွာပစ်ခတ်နိုင်မှုကို ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ကင်ဂျုံအန်းဟာ ကျွန်မတို့ဆီမှာ နျူကလီးယား အင်အားပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ ၊ ဒုံးကျည်စွမ်းပကားကို တည်ဆောက်နိုင် ခဲ့ပြီလို့ဆိုတဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့သမိုင်းဝင် ဖြစ်ရပ်တွေကို နောက်ဆုံးတော့ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့ပြီမို့လို့ ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ၏ အဆိုအရ ယင်းဒုံးကျည်သည် အသစ်ထုတ် လုပ်ထားသောယာဉ်မှ ပစ်လွှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိပ်ဖူးသည်လည်း လေထုထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အလုပ်မရှိဘဲ လစာပေးချေနေရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း သောင်းချီအရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စက်မှုဝန်ြ